Ku saabsan xadidaada lagu suubiyay fursadaha lagu helo ruqsadda deggenaanshada - Migrationsverket
/ Su’aalaha caadiga ah iyo jawaabahooda
/ Ku saabsan xadidaada lagu suubiyay fursadaha lagu helo ruqsadda deggenaanshada
Frågor och svar om begränsade möjligheter till uppehållstillstånd– somaliska
Maxaa laga wadaa sharciga ku meel gaarka?
Waa sharci ku meel gaar oo micnihiisa yahay in qofka difaac baahi u qabo la siin karo kaliya ruqsadda deggenaanshada oo ku meel gaar meeshii ahaan jirtay ruqsadda deggenaanshada oo joogtada. Adiga oo loo arko inaad haysatid sabab qoxootimino waxaa la siin ruqsadda deggenaanshada oo saddex sano. Adiga oo loo arko inaa tahay qof u baahan difaacid waxaa la siin ruqsadda deggenaanshada oo 13 bilood. Qoys dib u mideyn weey u suurtagali qofka haysto sabab qoxootimino, laakiin ka xadidantahay qofka haysto difaacid. Qofka doonaayo inuu ehelkiisa keensado Iswiidhan waxaa qaban shuruuda masruufida. Sharciga wuxuu hirgalay 20 juulay 2016.
Ruqsadda deggenaanshada oo ilaa intee baa aniga heli doona?
Ilaa inta ey ruqsadda deggenaanshada ahaan doonto waxey ku xirantahay nooca difaaca oo go’aanka lagaa gaaray. Qofkii la siiyo difaacida qoxootiga waxaa la siin ruqsadda deggenaanshada oo saddex sano. Qofkii la siiyo difaacida nooca kale waxaa la siin ruqsadda deggenaanshada oo 13 bilood.
Sidee baa aniga warbixin uga heli kara haddii aan helay difaacida qoxootiga?
Waxey ku qornaan go’aanka lagaa gaaray haddii aad heshay difaacida qoxootiga ama difaacida nooca kale. Go’aanka waxaa la socon warbixin oo ilaa inta ruqsadda deggenaanshada lagu siiyay ey ansaxsantahay iyo waxyaabaha aad xaqa u leedahay. Qof kuu sii sheegikaro ma jiro nooca difaacida aad heli doontid inteysan Hay’adda laanta socdaalka baaritaan ku suubin codsigaada iyo go’aan ka gaarin ruqsadda deggenaanshada.
Maxaa sabab u ah in aniga la i siinin difaacida qoxootiga?
Hay’adda laanta socdaalka waxey qiimeeysay in adiga aadan fulineyn shuruudaha sida ku qoran wada heshiinta qoxootiga caalamka oo UN.
Inta ka akhriso shuruudaha la dooni inaad fulisid sidii laguugu qiimeeyo qoxootinimo ama difaacida nooca kale.
Maxey ku kala duwan yahiin ruqsadda deggenaanshada joogtada iyo ruqsadda deggenaanshada ku meel gaarka?
Haddii adiga lagu siiyo ruqsadda deggenaanshada joogtada adiga waxaad xaq u leedahay ku noolaatid, ka shaqeysid iyo shuruudaha la qabtid dhammaan dadka kale oo Iswiidhan ku nool. Ruqsadda deggenaanshada aad haysatid waxeey ansaxsantahay ilaa intaa adiga Iswiidhan ku nooshahay.
Ruqsadda deggenaanshada ku meel gaarka waxeey ansaxsantahay kaliya 13 bilood ama saddex sano. Adiga xaq waad u leedahay inaad ku noolaatid iyo ka shaqeysid Iswiidhan, laakiin markuu ruqsadda wakhtigeeda dhammaado Hay’adda laanta socdaalka waxey tijaabin sababahaada oo haddii aad Iswiidhan sii joogeysid.
Yaa heli karo ruqsadda deggenaanshada joogtada?
Waxaa ruqsadda deggenaanshada joogtada kaliya heli karo dadka sharcigii hore lagu tijaabiyo iyo dadka xeryaha qoxootiga.
Yaa lagu tijaabin sharciga ku meel gaarka iyo yaa lagu tijaabin sharcigii hore?
Waxaa kaliya sharcigii hore lagu tijaabin carruurta waalid la’aanta ah oo magangelyo soo codsadeen ugu dambeyntii 24 nofembar 2015 iyo qoysaska haystaan carruur ka yar 18 sano oo magangelyo soo codsadeen ugu dambeyntii 24 nofembar 2015.
Haddii arrinta lagu tijaabin sharcigii hore waxaa qasab ah in carruurta ka yar yahiin 18 sano wakhtiga Hay’adda laanta socdaalka go’aanka gaareyso.
Dadka kale oo dhan waxaa lagu tijaabin sharciga ku meel gaarka.
Aniga magangelyo waxaa soo codsaday ka hore 24 nofembar 2015. Carruurteyda waxey ku dambeeyaan wadankii hooyo. Anaga ma helikarna ruqsadda deggenaanshada joogtada qoys carruur haysto ahaan?
Maya, haddii adiga kaligaa Iswiidhan ku nooshahay codsigaada waxaa lagu tijaabin qof weeyn oo kaligiis ah. Haddii adiga heshid ruqsadda deggenaanshada qoyskaada waxey haystaan fursad ey ku soo codsadaan ruqsadda deggenaanshada sidey adiga kuugu imaadaan Iswiidhan intaa ruqsadda aad haysatid ey ansaxsantahay.
Aniga go’aanka waxaa helay ka hore 20 juulay 2016. Maxaa aniga i quseeyo?
Adiga oo helay go’aan inta la gaariin ama ugu dambeyntii 20 juulay waxaa lagu tijaabiyay sharcigii hore iyo sharciga ku meel gaarka go’aankaada saameyn kuma yeelaan.
Aniga waxaa la i siiyay ruqsadda deggenaanshada ku meel gaarka. Maxaa dhici markuu wakhtigeeda dhammaado?
Markuu wakhtiga ruqsadda deggenaanshada ku meel gaarka dhammaado waxaa la tijaabin sababahaada oo haddii aad Iswiidhan sii joogeysid. Haddii adiga wali baahi usii qabtid difaacid waxaa lagu siin mid cusub oo ruqsadda deggenaanshada ku meel gaarka.
Haddii adiga haysatid shaqo oo adiga isku masruufikartid waxaad helikartaa ruqsadda deggenaanshada joogtada markey ruqsadda deggenaanshada ku meel gaarka dhammaato.
Maxaa aniga la iga dooni sidaa ku helikaro ruqsadda deggenaanshada joogtada?
Haddii adiga haysatid shaqo oo adiga isku masruufikartid waxaad helikartaa ruqsadda deggenaanshada joogtada markey ruqsadda deggenaanshada ku meel gaarka dhammaato. Shaqo bixiyaha waa inuu ogeysiin usoo diraa Hay’adda canshuuraha inaad shaqo heshay ugu dambeyn bisha ku xigto bisha aad shaqada bilaawday. Mushaarka, ceymsika iyo shuruudaha kale oo shaqaalaha waa qasab inaad fulisid sida ku qoran heshiinta-wadajirka shaqaalaha.
Haddii adiga aad ka yartahay 25 sano iyo haysatid shaqo aad isku masruufikartid waxaad kaliya haysataa fursad inaad heshid ruqsadda deggenaanshada joogtada haddii aad dhameystirtay waxbarashada dugsiga sare ama mid u dhigmato.
Aniga waxaan haystaa ruqsadda deggenaanshada ku meel gaarka. Aniga ma heli daryeel caafimaad haddii aan xanuunsanahay?
Haa, adiga waxaad xaq u leedahay daryeelka caafimaadka sida dadka haysto ruqsadda deggenaanshada joogtada.
Inta ka akhriso warbixin ku saabsan daryeelka caafimaadka.
Ku saabsan xadidaada lagu suubiyay fursadaha lagu helo ruqsadda deggenaanshada
Ku saabsan qoys dib u mideynta iyo shuruuda masruufida
Su’aalo iyo jawaabo khuseeya sugitaanka baaritaanka magangelyada
Ku saabsan xadidaada lagu suubiyay sharciga qaabilaada dadka magangelyodoonka (LMA)
Waxyaabaha khuseeya oggalaanshaha shaqada (AT-UND) iyo sharciyada lagu shaqaynkaro